विश्वकपः अन्तिम खेलमा भारतविरुद्ध एन्जेलोको अर्धशतक - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकपः अन्तिम खेलमा भारतविरुद्ध एन्जेलोको अर्धशतक
काठमाडौं, असार २१ । आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत भारत विरुद्धको अन्तिम खेलमा श्रीलंकाका अनुभवी ब्याट्सम्यान एन्जेलो म्याथ्यूजले अर्धशतक पूरा गरेका छन् । उनले ३ चौकाको मद्दतमा ७६ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । एन्जेलोले यसअघि इंग्ल्याण्डविरुद्ध अर्धशतक बनाउँदै टिमलाई जिताएका थिए ।
आज श्रीलंकाले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ । सेमिफाइनल दौडबाट बाहिरिसकेको श्रीलंका सुखत अन्त्यका साथ मैदान उत्रिएको छ । भारतले भने अन्तिम ४ मा स्थान बनाउन सफल भएको छ । आज श्रीलंकालाई हराउन सके भारत अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिने छ ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप क्रिकेटः भारतविरुद्ध एन्जेलोले पूरा गरे शतक
कस्तो छ विगत?
अहिलेसम्म श्रीलंका र भारतबीच एकदिवसीय क्रिकेटमा १५८ पटक खेल भएको छ । जसमा भारतले ९० खेलमा जीत हासिल गरेको छ । श्रीलंकाले ५६ खेलमा जीत दर्ता गरेको छ । एक खेल टाई भएको थियो । ११ खेलको नतिजा आएको थिएन । इंग्ल्याण्डको मैदानमा यी दुई टिमबीच ७ पटक भिडन्त भएको जसमा ५ खेलमा भारत र २ खेलमा श्रीलंका विजयी भएको थियो । आज टिममा कोकोले पाए मोका? हेर्नुस् प्लेइङ–११
याे पनि पढ्नुस विश्वकप २०१९ मा रोहितले पूरा गरे पाँचौ शतक, बने सर्बाधिक रनकर्ता
भारतको प्लेइङ–११ः विराट कोहली (कप्तान), जसप्रित बुमराह, ऋषभ पन्त, महेद्रसिंह धोनी (विकेटकीपर), रविद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पाण्ड्या, लोकेश राहुल, रोहित शर्मा र कुलदीप यादव।
श्रीलंकाको प्लेइङ–११ः दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), कुसल परेरा, कुसल मेन्डिस, धनन्जय डी सिल्वा, अविष्का फर्नांडो, लसिथ मलिंगा, एन्जेलो म्याथ्युज, थिसरा परेरा, लाहिरू थिरिमाने, इसुरू उडाना र कसुन रजिथा ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप क्रिकेटः श्रीलंकाविरुद्ध भुवनेश्वर महंगा
ट्याग्स: Angelo Mathews, IND Vs SL
भरतपुर महानगरमा रेनुले लिइन ३ हजार बढीकाे अग्रता
धादिङको त्रिपुरासुन्दरी अध्यक्षमा कांग्रेस, उपाध्यक्षमा माओवादी विजयी
५४ हजार मतगणना हुँदा बालेनकाे दाेब्बर अग्रता कायमै